I-Periscope Post & Ukuqokwa Kwama-audio u-Edwin Polanco onguNjiniyela Oyinhloko - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Periscope Post & Ukuqokwa Kwama-audio u-Edwin Polanco onguNjiniyela Omkhulu
I-Periscope Post & Ukuqokwa Kwama-audio u-Edwin Polanco onguNjiniyela Omkhulu
I-HOLLYWOOD- Uchwepheshe we-IT we-post-zokukhiqiza u-Edwin Polanco ujoyine i-Periscope Post & Audio, Hollywood, njengonjiniyela wayo oyinhloko. IPolanco izosetha izinqubomgomo zobunjiniyela, zengamele imisebenzi yezobuchwepheshe kanye nokuhlelela ubuchwepheshe obuholayo. Ubuye futhi aphathe izici zobunjiniyela zesakhiwo esiqhubekayo saleso sikhungo.
"U-Edwin uletha isipiliyoni esijulile ezikhungweni ezinkulu kanye nolwazi lokuhamba komsebenzi wamanje kanye nokwenza kahle kwezindlela zobunjiniyela," kusho umphathi wePeriscope Post & Audio uBen Benedetti. "Uyisinqumo esihle sokuthi ahole phambili njengoba siqhubeka nokukhulisa indawo yethu nokunwebelana nezinsizakalo."
Izinto eziza kuqala kwiPolanco ukuqinisekisa ukuthi ingqalasizinda yesikhungo yenziwa kahle ukusekela ukuhamba komsebenzi kwamanje nokwesikhathi esizayo, futhi kuhlangatshezwane ne-MPAA nezinye izidingo zokuphepha ezisezingeni lomkhakha. “Inhloso yami ukuqiniseka ukuthi sikulungele ukuvela okulandelayo kwezobuchwepheshe lapho kufika,” kusho yena. "Ushintsho lwenzeka ngokushesha futhi sifuna ukuthi kube nezinsizakusebenza zokubhekelela izisombululo ezizokwenza imisebenzi isebenze kahle futhi ihlangabezane nezidingo zamakhasimende ethu."
Phambilini uPolanco ubesebenza njengonjiniyela wekhampasi yensimu ephezulu ku-Impact Networking. Isizinda sakhe sibuye sifaka iminyaka ye-4 njengonjiniyela wezinhlelo eDeluxe Digital Studios naseminyakeni ye-4 endimeni efanayo e-Ascent Media. Uthole iziqu zeGraziadio Business School yasePepperdine University, waqala umsebenzi wakhe wokuba ngumphathi wenethiwekhi ne-Stark Services.
"Okwenzeka esikhathini esidlule kungilungiselele kahle iqhaza lami ePeriscope," kusho uPolanco. “Ngibheke phambili ekusebenziseni ulwazi lwami lwe-IT ukuthuthukisa ukuguquguquka kokusebenza okusebenzayo nokusebenzayo kwemisindo ehlanganisiwe yemisindo nezithombe. Kukhona i-camaraderie enhle nenhloso eyabiwe kulesi sikhungo. Wonke umuntu uyakuqonda okudingeka akwenze futhi udonsa ngakolunye uhlangothi lwezintambo. Kuhle ukuba yingxenye yenhlangano lapho wonke umuntu eba negalelo. ”
Mayelana ne-Periscope Post & Audio
I-Periscope Iposi Neyomsindo inkampani egcwele yokuthunyelwa kwe-service enezikhungo e-Chicago Cinespace futhi Hollywood. Zombili lezi zakhiwo zinikeza ngezinsiza eziningi zokuqeda umsindo nezithombe zethelevishini, ifilimu, ukukhangisa, imidlalo yevidiyo kanye neminye imidiya. futhi studio yokurekhoda yomsindo etholakala eCinespace Chicago onguchwepheshe wefilimu, ithelevishini, imidlalo yevidiyo, nokukhangisa. Amaphrojekthi amasha afaka uchungechunge lwethelevishini Empire, I-Exorcist futhi Girl New, amafilimu I-Kickboxer: Impindiselo, I-Workers Cup, Ukuvuswa kweGavin Stone, Ukulwa nomama futhi Isignesha Hambisa, nokukhangisa kwe-Honda, i-Pepsi ne-Groupon.
Ukusakaza-SocialMeida Ukuhlela Ubunjiniyela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor abantu abasendleleni ukukhiqizwa kokuthunyelwe SJGolden - I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago Ubuchwepheshe be-TV Umlingisi wevidiyo	2019-11-07
Ngaphambilini: INewTek TriCaster® Mini Video Production System Inikezela I-UHD Digital Media Production kanye Nokusakaza
Olandelayo: I-TNDV Television Iphuma Emikhiqizweni ye-TSL ukukhulisa i-Broadcast Workflow yayo